अब कोरोनासंगै जिउन सिक्नुपर्छ - नवीन लामिछाने | OB Media
Saroj Lamsal | ६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार २१:३२
कोरोना भाईरस हाम्रो बाताबरण र वरिपरि रहिरहन्छ । यो हराउँदैन तथा उपचार र भ्याक्सिन बन्ने क्रममै छ्न , त्यसको लागि समय लाग्ने नै छ ।
के अब त्यो समयसम्म लकडाउन गरिरहने त?
लकडाउनलाई अबस्था , समय र ठाउँ हेरी गर्दै हटाउदै गरिरहन सकिन्छ , यसलाई सहज लिनुपर्दछ । लकडाउनका पनि विभिन्न मोडेल हुनसक्छ्न । लकडाउन मात्र गरेर मानिसहरुको आवतजावत र सम्पर्क रोक्न सकिएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन । लकडाउन भनेको मान्छेलाई रोकेर भाईरसलाई खोज्ने हो । संक्रमण जोखिम बढ्न थाल्यो भने सम्भावित क्षेत्र भित्र आवत जावत कम गर्न लकडाउन गर्न सकिन्छ ।
संक्रमण क्षेत्र सिल गरेर पनि लडाउन गर्न सकिन्छ । अबस्था हेरि पुरै देश मात्र होईन कुनै स्थान बिशेषमा लकडाउन वा सिल गर्नुपर्ने हुनसक्छ । लकडा।उन भन्ने शब्दले जनमानसमा पार्ने असरलाई कम गर्न यो शब्दलाई सामान्यिकरण गर्नुपर्दछ ।
अर्को कुरा लकडाउन एकैचोटि हटाउनु हुदैन, क्रमश हटाउनुपर्दछ । अस्पताल, ल्याव ,औषधि ,पुर्वाधार बनाउदै जानुपर्दछ । कोरोनाको लागि अलग अस्पताल बनाउनुपर्दछ स्वास्थ्यकर्मीको अलग अलग टिम सहितको ।
भ्याक्सिन नबनुन्जेल वा फाट्टफुट्ट केश देखिँदा सम्म लकडाउन गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा पनि अब तर्क संगत नहुन सक्दछ । लकडाउन भनेकै जनतालाई कोरोना बाट वच्न अनुशासित गराईएको हो । सरकारले जोखिम लिने भन्ने कुरा हुदैन, त्यसैले सम्भावना रह्यो भने उसले लकडाउन गर्न सक्छ। व्यापक जन अनुशासन हुने भयो भने लकडाउन आवश्यक पर्दैन । शंकास्पद वा लक्षणबिहिन संक्रमितहरु घरमै बस्ने, कसरी बस्ने त्यसको योजना बनाउने, लक्षण देखिए मात्र अस्पताल लैजाने गर्नुपर्दछ ।
के अब सधैं डराएर बस्ने त?
होईन अब आफूलाई बदल्नु पर्दछ, कोरोना भन्दा पहिलाको अबस्थामा जस्तो जीवनशैलीमा रहन सकिन्न । अनुशासनमा
रहने अनि कोरोनासंगै जीवन जिउन सक्ने अबस्थाको सिर्जना गर्ने र त्यसको लागि तयार रहने काम गरेमा मात्र हामी यो भयको अबस्थाबाट नयाँ गन्तव्यमा अघि बढ्न सक्छौं।
(लेखक जनस्वास्थ्यबिद हुन ।)
नक्कली मदिरा कारोबारी श्रवण भन्छन्: ऋण तिर्न गलत काम सुरु गरें, मैले कारबाही भोग्नै पर्छ
कोरोनाभाइरस संक्रमित वा मृतक व्यक्तिको बारेमा स्पष्ट सुचना दिन निर्देशन